Torolàlana an'ny mpanitsy sy mpanitsy | Avy amin'ny Linux
Torolàlana an'ny mpanitsy sy mpanitsy
2 Fepetra takiana hanoratanao lahatsoratra tsara
3 Miaraha miasa amin'ny lahatsoratra
3.1 Raha azo atao dia aza adika / apetaho
3.2 Diniho tsara ny tsipelina
4 Aza adino velively ny mametraka ny loharano niavian'ny fampahalalana
5 Atiny mandatory
6 Mikaroha alohan'ny handefasana
7 Miaraha miasa amin'ny sary
7.1 Atsofohy ny sary
8 Miaraha amin'ny ShortCodes
9 Miara-miasa amin'ny SEO aho
9.1 Fanasongadinana ireo teny sahisahy sy fanamafisana amin'ny sora-mandry
9.3 Fampiasana Tags
9.4 Fananana ALT amin'ny sary
10 Fizarana votoaty ho faritra
10.1 Maninona raha ampiasaina a na
11 Rohy maharitra
Raha mamaky ity torolàlana ity ianao dia mety satria te hiara-hiasa amin'ny DesdeLinux.net ianao ary mahafaly anay izany.
Araky ny fantatrao, Avy amin'ny Linux dia bilaogy iray izay nahazo mpanaraka marobe noho ny kalitaon'ny lahatsorany sy ny fanahim-piarahamonina izay miaina manodidina azy.
Mino ny The Community sy ny lanjan'antoka ny lanjan'ireo anjara birikinao izahay, ary izany no antony ahafahan'ny olona maniry sy liana mizara ny fahalalany sy ny zavatra niainany tamin'ny alàlan'ny bilaoginay. Tsy mandoa vola na mandoa izany izahay! Ilaina ihany ny fananana faniriana hizara.
Ity torolàlana ity dia mikendry ny hampiseho izay singa tokony horaisina rehefa mamoaka lahatsoratra. Ny fanarahana ireo masontsivana voalaza etsy ambany dia tsy vitan'ny hoe manatsara kalitao kokoa ny lahatsoratra, fa mitahiry asa be ho an'ny ekipa mpanova.
Raha tsy manaraka ny fepetra takiana ao amin'ity antontan-taratasy ity ianao na inona na inona antony, dia mety hihemotra amin'ny fankatoavana na tsy famoahana tsotra izao ny lahatsoratrao. Ampio izahay hampiely fahalalana malalaka.
Izay fanontaniana mety anananao dia mba alefaso amin'ny mailaka anay staff@desdelinux.net miaraka amin'ilay lohahevitra: Drafting Guide.
Misaotra anao te hiara-hiasa !!!
Fepetra takiana hanoratanao lahatsoratra tsara
Misy fepetra takiana lehibe tsy maintsy raisina rehefa mamoaka lahatsoratra ao amin'ny DesdeLinux. Ny tena zava-dehibe dia ny te hizara, fa tsy maintsy tonga amin'ny mpamaky amin'ny fomba tsotra sy madio ary mahitsy. Andao hojerentsika ny sasany amin'ny antsipiriany izay tsy maintsy raisintsika:
Miaraha miasa amin'ny lahatsoratra
Raha azo atao dia aza adika / apetaho
Ao amin'ny DesdeLinux dia nampiavaka ny tenantsika foana isika tamin'ny alàlan'ny fanolorana atiny voalohany, ary na dia nalaina avy amin'ny tranokala hafa aza ny lahatsoratra dia manandrana misambotra hatrany ilay hevitra izahay ary amin'ny teninay na amin'ny fomba fijerinay dia mamorona lahatsoratra vaovao izahay.
Ny zava-dehibe indrindra dia ny fisorohana ny olan'ny zon'ny mpamorona, ankoatry ny fanalavirana ny sazy avy amin'ny Google ho an'ny atiny duplicate. Amin'izany no ahafahantsika mitandrina ny haavon'ny kalitaon'ny bilaogy.
Diniho tsara ny tsipelina
Ny iray amin'ireo lahasa sarotra indrindra rehefa manadihady ny lahatsoratra alohan'ny hamoahana azy dia ny fanitsiana ny tsipelina diso, ny accents, ny koma ary ny mari-piatoana hafa, ary koa ny fanitsiana ny fanararaotana ny tranga ambony sy ambany.
Amin'ny fiantombohan'ny fehezan-teny sy amin'ny anarana mety toy ny Facebook y Skype Manomboka amin'ny sora-baventy voalohany. Ny anaran'ny fampiharana toa Pidgin, Amarok, sns. Izy ireo dia anarana mety ary koa manana litera voalohany.
Manoro hevitra izahay ny hametraka Spell Checker ao amin'ny browser.
Aza adino velively ny mametraka ny loharano niavian'ny fampahalalana
Raha sendra tranokala hafa ilay lahatsoratra tianao soratana dia tsy maintsy mametraka rohy ianao DIRECT amin'ny loharano. Raha toa ka tsy manana kinova nomerika ny loharano dia mbola mazava ny anarana, ny lohateny, ny isa, ny fanontana sns. Izany dia natao ho an'ny olana etika.
Ireo singa telo izay tsy tokony hanjavona ao amin'ny lahatsoratra iray dia:
Sary miavaka: Tokony ho sary tsara kokoa araka ny lohahevitr'ilay lahatsoratra. Tokony ho sary mahavariana izy io, ary miaraka amin'ny refy 4: 3, izany hoe, malalaka kokoa noho ny avo izy. Raha ny mahazatra dia mikarakara ny fanapahana sy ny fanitsiana ny sary ny WordPress. (Ahoana ny fomba hampidirana sary asongadiny etsy ambany)
Sokajy: Hamarino fa ny lahatsoratra dia ao amin'ny sokajy mety, izay tokony ho iray a raha tsy mihevitra ianao fa tokony ho lahatsoratra ihany koa soso-kevitra.
Tags: Ny tagy dia teny tsotra na mitambatra izay manonona ampahany lehibe amin'ny lahatsoratra. Ohatra, raha momba ny fampiharana antsoina hoe ilay lahatsoratra azon'ny gedit sy ny fiasa ao Ubuntu, ireo marika dia mety ho gedit, ubuntu (tafasaraka hatrany amin'ny koma). Raha mamitaka, howto, na zavatra mitovy amin'izany ilay lahatsoratra, dia mety ho ireo tagy gedit, ubuntu, torohevitra, fomba.
Mikaroha alohan'ny handefasana
Alohan'ny hanoratanao lahatsoratra dia tokony hikaroka ao amin'ny bilaogy ianao hanamarinana fa mbola tsy navoaka izy io.
Zava-dehibe ny alohan'ny hamoahana lahatsoratra iray, ampiasao ny motera fikarohana an'ity tranonkala ity hahitana raha efa nisy zavatra navoaka momba an'io lohahevitra io. Amin'izany fomba izany dia tsy vitan'ny misoroka ny atiny avoaka fotsiny isika, fa afaka mitanisa ireo lahatsoratra teo aloha mba hanomezana sakafo ny atiny izay tianay hambara.
Miaraha miasa amin'ny sary
Zava-dehibe ny manasongadina izany Ny sary rehetra izay hampiasainay ho an'ny lahatsoratray dia tokony apetraka amin'ny bilaogy fa tsy tokony hampiasa loharano na rohy ivelany. Amin'izany fomba izany dia manome toky izahay fa hisy foana izy ireo.
Atsofohy ny sary
Raha te hampiditra sary dia mila tsindrio fotsiny ny bokotra: Manampia zavatra:
Ity dia hanome safidy roa antsika: Alefaso ny rakitra o mifidiana sary efa misy ao amin'ny Media Library.
Rehefa mametraka sary ao amin'ilay lahatsoratra isika dia tsy maintsy mandray ireo masontsivana 3 izay tsy maintsy atao:
Manana an-tsoratra Alternative ny sary
Izany dia mivoaka mifanaraka amin'ny Center
Manana habe lehibe izany
araka ny hita etsy ambany:
Tsy maintsy misafidy sary iray foana isika asongadin'io. Raha tsy mahita sary ho an'ny paositra ianao dia azonao jerena ao amin'ny Tranonkala Multimedia miaraka amin'ireo sary misy.
Miaraha amin'ny ShortCodes
Mampiasà kaody fohy: Ity faritra ity dia mety ho somary sarotra ihany, saingy tsy sarotra izany. Ny bilaoginay dia manohana tondro sasany izay manome endrika tsara kokoa ho an'ny lahatsoratra. Ny kaody fohy dia apetraka ao anaty fononteny, ary misy hatrany ny fisokafana ary ny iray fanidiana. Andao jerena ohatra vitsivitsy, mariho fa manampy toerana ao anatin'ny fononteny isika mba hankasitrahana ny syntax:
[info] lahatsoratra haseho [/ info]: Ity mari-pamantarana ity dia ampiasaina hanomezana fampahalalana fanampiny na hanamarihana zavatra manan-danja izay tsy mampidi-doza. Ohatra: [info] Natao hanolorana fampahalalana fanampiny amin'ny lahatsoratra [/ info]
Izy io dia ampiasaina mba hanomezana fampahalalana fanampiny amin'ny lahatsoratra
Lahatsoratra [fampandrenesana] haseho [/ fampandrenesana]: Ity famantarana ity dia ampiasaina hanasongadinana ireo fampahalalana izay laharam-pahamehana, toy ny lesoka mety hitranga sy ny hafa. Ohatra: [fanairana] Izy io dia ampiasaina handrarana zavatra mampidi-doza atao ao amin'ilay lahatsoratra ... [/ fampandrenesana]
Nampiasaina handrarana zavatra mampidi-doza hatao ao amin'ilay lahatsoratra ...
[fampitandremana] lahatsoratra haseho [/ mampitandrina]: Ity mari-pamantarana ity dia ampiasaina hampandrenesana ny mpampiasa amin'ny zavatra rehetra, hitandrina, fa tsy mampidi-doza ny fanaovana izany. Ohatra: [mampitandrina] Ampiasaina hampitandrina momba izay rehetra ao amin'ilay lahatsoratra [/ mampitandrina]
Nampiasaina hanaitra momba izay rehetra ao amin'ilay lahatsoratra
Lahatsoratra [mpandresy] haseho [/ mpandresy]: Raha te hahafantatra olona na zavatra iray isika dia ity no tondro ampiasaina ho azy. Ohatra: [mpandresy] Ity dia lahatsoratra hahafantarana olona na zavatra ao amin'ny lahatsoratra [/ mpandresy]
Ity dia lahatsoratra iray hahafantarana olona na zavatra iray ao amin'ilay lahatsoratra
Miara-miasa amin'ny SEO aho
SEO dia tsy inona fa ny fametrahana izay azontsika alaina ao amin'ny Google sy ny motera fikarohana hafa, fa indrindra amin'ny Google, izany dia tsotra. Fa mba hanomezan'i Google toerana tsara antsika dia tsy maintsy mihevitra zavatra marobe isika rehefa manoratra ny lahatsoratray.
Ho an'ny lahatsoratra iray mifandraika amin'ny Google Robot, tokony ho tsy latsaky ny 300 teny. Fantatray fa ny lahatsoratra lava dia tsy afaka soratana foana, fa ataovy ao an-tsaina foana izany.
Fanasongadinana ireo teny sahisahy sy fanamafisana amin'ny sora-mandry
Rehefa manoratra lahatsoratra isika dia tsara foana ny manasongadina izay resahintsika na zavatra mifandraika amin'izany. Ohatra, raha miresaka Kubuntu, teny toa: KDE, Ubuntu, sns. Ireo teny amin'ny Bold dia hitan'ny robots fikarohana ary mahazo ny laharam-pahamehana amin'ny valiny. Azontsika atao koa ny manantitrantitra andian-teny, teny na sombintsombiny amin'ny alàlan'ny fametrahana sora-tanana amin'ny sora-mandry.
Amin'ny ankapobeny, ny lahatsoratra iray dia mety manana Tags (marika) maro, fa tsy mihoatra ny sokajy 2. Ohatra, raha miresaka Unity y Ubuntu, Sokajy ihany no tokony hampiasaina: Tontolon'ny Desktop. Izy ireo ihany no homarihina ho soso-kevitra, ireo lahatsoratra izay misy fampahalalana sarobidy toy ny Tips, HowTo na ny fifandraisany lehibe kokoa.
Ilaina tokoa ny tag rehefa mitady atiny ao amin'ny bilaogy, raha ohatra ka mampiasa ny url isika https://blog.desdelinux.net/tag/.
Tags izay manana habaka, toy ny linux mint, novaina ho linux-mint, ka raha hitady lahatsoratra mifandraika amin'ity tag ity dia mampiasa url izahay: https://blog.desdelinux.net/tag/linux-mint. Ny tag maromaro dia azo ampiasaina amin'ny paositra iray, fa tsara kosa ny tsy hitarina mihoatra ny 6.
Fananana ALT amin'ny sary
Araka ny nohazavainay etsy ambony, ny sary dia tsy maintsy misy a Lahatsoratra hafa, raha azo atao, dia misy ifandraisany amin'ny lohateny na ny lohahevitr'ilay lahatsoratra. Ny Alternative Text dia tsy hoe voatanisa ao anaty motera fikarohana ihany fa manolotra vaovao momba ilay sary raha tsy azo aseho ilay izy. Raha miresaka isika Ubuntu, ny sary dia tokony hanana ao amin'ny Alternative Text ny teny Ubuntu. Tsy maninona na taloha na aorina, na vavaka.
Fizarana votoaty ho faritra
Ny fizarana ny atin'ny lahatsoratra ho fizarana dia fomba fanao anoroana azy io satria manamora kokoa ny famakiana azy ireo ary raha vita tsara dia afaka manatsara ny SEO. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy mampiasa lohateny ianao hamolavola ny lohatenin'ny fizarana. Ohatra:
Lohatenin'ny ampahan'ny lahatsoratro
Lohateny fizarana hafa
Azo ampiasaina ihany koa izy ireo SY ho an'ny fizarana fizarana.
Maninona raha ampiasaina a na
Tsotra, satria ny antontan-taratasy HTML rehetra izay arahin'i Google tsara dia tsy maintsy manana tokana ihany izay saika ho eo amin'ny sary famantarana tranokala foana. Amin'ny filaharan'ny ambaratongam-pahefana dia arahin'ny , izay ampiasaina amin'ny lohatenin'ilay lahatsoratra ny DesdeLinux, ka tsy maintsy miaraka ireo fizarana mandroso
Raha tsikaritrareo, isaky ny mametraka ny lohatenin'ny lahatsoratra iray izahay, dia apetraky WordPress eo an-tampon'ny mpampanonta lahatsoratra ny URL an'ny lahatsoratra:
Raha ny lohatenin'ny lahatsoratray dia, ohatra: Torolàlana an'ny mpanitsy sy mpanitsy, WordPress dia hametraka antsika ho rohy maharitra: editor-sy-editors-guide. Ity rohy maharitra ity dia tsy ratsy velively, fohy dia fohy, fa ny fanao tsara dia ny mamela ireo teny fotsiny manan-danja Tianay haseho anay amin'ny valin'ny karoka i Google.
Ny rohy maharitra dia azo ovaina amin'ny bokotra eo akaikiny ary amin'ity ohatra ity dia tsara kokoa ny hamela azy araka ny aseho amin'ny sary etsy ambony: torolàlana-mpanoratra-tonian-dahatsoratra.
Ny rohy maharitra dia tsy misy ifandraisany amin'ny lohatenin'ilay paositra. Ny lohatenin'ny paositra dia mety ho lava kokoa nefa tsy misy olana
Sintomy amin'ny PDF ity torolàlana ity